Waxaannu booqaneynaa gurigaaga taakuleynta si aannu u aragno sida uu u shaqeynayo | IVO.se
Adigaaga deggan oo guri taakuleyn waxaad fursad u leedahay in annaga ka soconna Hey’adda kormeerta daryeelka iyo xannaaneyta (IVO) aad nala hadashid marka aan booqaneyno gurigaaga taakuleynta. Booqashada waxaa la dhahaa kormeerid.
Haddii aad dooneysid in aad nala hadashid waxaad taas u sheegi kartaa shaqaalaha ama annaga marka aannu imaaneyno. Haddii aad u baahantihid turjumaan anaga ayaa xallineyna taas.
Maxaannu u kormeereynaa gurigaaga taakuleynta?
Waxaa sharciga ku qoran in IVO ay kormeereyso guryaha taakuleynta ee loogu tala galay dhallinyarada. Mararka qaar shaqaalaha guryaha taakuleyntu horay ayey usii ogyihiin baarintaanka, mararka qaarna waxaannu nimaadaa iyadoo aan cidna ogeyn taas.
Kormeerku wax farqi ah ma keeni karyaa?
Haa. Waannu koontaroolnaa guryaha taakuleynta si ay u raacaan sharciyada iyo xeerarka jira. Tan ugu muhiimsan waa in la hubiyo in dhallinyaradiinnu aad heshaan deegaan aamin ah oo la hubo, noqotaanna kuwa la dhegeysto oo hela taakuleynta ay u baahanyihiin. Haddii aad u aragtid in ay wax qaldanyihiin ama aad u baahantihid in wax la beddelo waxaad ugu horreynta la xiriireysaa shaqaalaha gurigaaga taakuleynta ama hey’adda adeegga bulshada. Haddii aadan dareemeyn in lagu dhegeysanayo ama aad dareemeysid ammaan darro, markaas annaga ka soconna IVO ayaad nala hadli kartaa.
Haddii aad tihid megengelyo doon oo aad qabtid su’aalo taabanaya arrinkaaga megengelyo doonnimada waxaad la xiriireysaa Hey’adda socdaalka. IVO kama shaqeyso arrimaha megengelyada, saameynna kuma yeelan karto in aad joogi kareysid Swiidhan.
Maxaa dhacaya inta uu kormeerku socdo?
Kormeer kasta waxaannu la kulannaa qof ka mid ah kuwa ka shaqeeya guriga taakuleynta iyo dhallinyarada dooneysa in ay fursad u helaan in ay nala hadlaan. Waxaannu dooneynaa in aannu oggaanno in aad mubssud ku tihid, haddii shaqaaluhu uu ku siinayo taakulada aad u baahantihid iyo haddii aad dareemeysid ammaan. Mararka qaarkood waxaa beddel ahaan dhici karta in wadahadalka dhallinyaradiinnu uu khadka taleefanka ku dhaco kormeerka kadib. Mararka qaarkoodna waxaa dhacda in aannu u baahanno in waxa wada hadalka kasoo baxa aannu kala hadalno hor joogaha guriga taakuleynta ama hey’adda adeegga bulshada.
Dabadeed waxaannau qoreynaa go’aan, halkaas oo ay ku taallo sida aanu u qiimeynay guriga taakuleynta – haddii aannu u aragno in ay jiraan wax ay shaqaaluhu u baahanyihiin in ay beddelaan. Go’aanku waxaa uu u shaqeynayaa sida warbixin, kaasoo xitaa ay ku jiraan wixii aad idinka dhallinada ahi dhahdeen oo la soo koobay - iyadoo aan la sheegin qofba wuxuu yiri. Mar walba xaqbaad u leedahay in aad wax ka heshid waxa go’aanka lagu qorayo. Weydii shaqaalaha gurigaaga taakuleynta.
Waqti kastaba nala soo xiriir
Haddii aad dooneysid in aad booqashada ka hor iyo ka dibba la hadashid qof annaga ka soconna IVO naga mid ah waad nasoo wici kartaa ama e-mail ayaad noo soo diri kartaa annaga booqannay guriga taakuleynta. Shaqaalaha ayaa haya nambarkeenna taleefanka iyo cinwaankeenna. Waxaad sidoo kale la xiriiri kartaan khadka Carruurta- iyo dhallinyarada marka aad xuquuqdaada su’aalo ka qabtid ama aad dooneysid in aad ka hadashid waxa aan si fiican u soconeyn xagga hey’adda adeegga bulshada ama daryeelka caafimaadka- iyo bukaanka.
Senast uppdaterad: 09/03/17